Zonke Imali on Earth – FX-Consultant
Indlela yabasebenzi kwi-Financial Markets
Imibuzo Neempendulo – Trading
Urhwebo kwi Financial Markets
Zonke Imali on Earth
Yonke Imali kunye asethi kwi-World eboniswe kwi Physical $100 eYilwayo – Ulwazi ngabantu
One Hundred Idola
$100 – Kakhulu counterfeited imali ihlelo ehlabathini. Ukugcinwa lusetyenziswa kakhulu enexabiso emhlabeni abathengisa iziyobisi. Ugcina umhlaba ihamba.
Ten amawaka eerandi
$10,000 – Kwanele ukuba ikhefu enkulu okanye ukuba athenge imoto kusetyenziswa. Unyaka omnye umsebenzi wesintu avareji emhlabeni.
$1,000,000 – na imali isikwere phantsi.
$100,000,000 – Nenala ukuba bajikeleze bonke abantu. Ingena kahle kwi ISO / Military pallet ezisezingeni.
One Billion Idola
$1,000,000,000 – Oku yindlela yeebhiliyoni zeerandi Kubonakala ngathi. 10 pallets of $100 imali.
One neetriliyoni zeedola
$1,000,000,000,000 – Xa lifake emhlabeni ilizwi “yezigidigidi” ngathi akukho nto, oku ke realit ka $1 neetriliyoni zeedola. Isikweri pallets ekunene yi $10 billion zeerandi. 100x loo kwaye unalo nenqaba $1 zezigidi ukuba 465 ezinyaweni ubude (142 mitha).
Gold kunye Silver zonke yotyalo kwi World
Demonocacy.info ezinikezela amanqaku lonke Gold kwaye zonke iSilver kwi World. Oku isishwankathelo esifutshane isixa lincinane igolide nesilivere ekhoyo ehlabathini ukulungiselela iinjongo zotyalo. Ixabiso sentengo zonke Gold utyalo-mali yeHlabathi $2.5 Yezigidigidi USD kwi $ 40 / gram okanye $ 1250 / ounce.
Kukho ngokubonakalayo isilivere ehlabathini ngaphezu kwegolide, kodwa ngenxa yokuba 'Isiliva iziphindwa zitshiphu ngaphezu kwegolide (ngaphantsi kwe $ 20 / oz ku 2017), ezininzi zesilivere zibasuse ilahlekile lonke ixesha. Silver lendlele ikwasetyenziswa kwimveliso mveliso. Isixa isilivere mali ifumaneke kuluntu kukho imali ngokumangalisayo elincinane. oorhulumente World musa ukubamba naziphi zolondolozo zesilivere olubonakalayo, ngokungafani ngegolide.
I-World Money Supply:
Amashumi amabini anesibhozo – $28 Zezigidi ngo Base Money
Amashumi amahlanu – $50 Zezigidi ngo Bank Money
Oku yindlela yimalini kwi planethi. Ayikho bonke imali ebonakalayo kodwa (njengoko kuboniswe ngasentla), uninzi lwalo wedijithali:
Imali Base ibandakanya imali agcinwe ziibhanki (efunyenwe Central wabo Iibhanki xa iibhanki wathengisa Government okanye imixokelelwane zeZiko Banks zabo Central, imali iyafumaneka ukuze siboleka kwicandelo labucala), imali egcinwe ezindaweni yebhanki (imali ebonakalayo) kunye nemali ezandleni zabantu. Le mali ayifumaneki kwi-ATM.
Bank Imali ibandakanya imali egcinwe yezorhwebo abantu iibhanki, iyafumaneka ukuze zokurhoxiswa nangaliphi na ixesha. Bank Imali kwakhona yeyani ekubizwa phandle Banks kubantu neshishini '. Iibhanki babe imfuneko kuvimba (ngokuqhelekileyo 10%) ukuba kufuneka siqhubeke ngesandla. Ukuba wonke umntu wagqiba ukuya ATM, baludiliza yonke into, apho kuya kubakho ngokubaleka elunxwemeni.
amahlanu anesibhozo $58 yezigidigidi – Ixabiso Zonke zikaRhulumente Bonds kwi World
abemi behlabathi ahlawule inzala kule mali eninzi ngenxa yokuba kumatyala adalwe ngoorhulumente ilizwe labo.
kwiibhondi zikarhulumente (debt) kubhekwa “lempahla” ngokuba bond (ekubhataleni irhafu) ahlawule inzala imali ebolekiweyo. Umbolekisi lufumene isiqinisekiso (le Bond- isithembiso ukuze ahlawule $$$ emva + umdla) ukubuyisa.
Ngokwesiqhelo Bonds zikaRhulumente zijongwa utyalo-mali ekhuselekileyo kwemali lokungahlawulwa kwemali kuba Oorhulumente bangabhala imithetho ezintsha (Nyusa & ukudala Irhafu ngokuzenzekelayo) ukuthatha imali labantu amandla (ngokoMthetho enzima: ukuphanga ngokomthetho). Enye indlela kwakhona iintlawulo-oko Asiyo intle kangaka kubatyali / ababolekisi kukuba ukuba Reserve Federal “yokuprinta” imali entsha, le yenza amandla ukuthengwa imali emali kunye abatyali ufumana ngaphantsi emva kwe Bamisa. Oku kudla yindlela yokhetho koorhulumente.
Kutheni uRhulumente Debt kakhulu? Ngenxa yokuba Abezopolitiko phezu-isithembiso ukuba abemi izinto bakwazi (NOT) akhulule, benza ukuze liwina ukhetho. Xa Politicans uwine ukuba aboleke imali yokuhlawula izithembiso zabo ukwenzela ukugcina izithembiso. Bavame liboleke ukuba azityebise kunye namaqabane abo lokubekana kolwaphulo.
One ikhulu elinesithandathu $116 yezigidigidi – Zonke Eselugcinweni Neebond zezoShishino World
Bonds Corporate ziyafana Bond Government, kodwa zomngcipheko. Iinkampani ezininzi ezinkulu athwale umngcipheko kude ngaphantsi kwe abolekisa ngemali kubantu– oku kwandisa ingozi kwaye iqhuba phantsi inzala ngemali. beenkampani ezinkulu boleka imali ngokufanelekileyo cheap kuthelekiswa kubantu abazimeleyo. Ngamanye amaxesha iinkampani ukuboleka imali yokuthenga umva imfuyo yabo bayiqhube ixabiso stock phezulu, kangangokuba ekwandiseni abatyali ngelixa gutting ngezimali inkampani.
Stocks uyatshintshatshintsha ixabiso, ngokuba ixabiso yabo ezingabonakaliyo- nexabiso elichazwa emiselwe yi-P / E (Ixabiso ku Iholo) ratio kunye neentlawulo stock isahlulo onethemba.
ezimakhulu mabini asithoba $290 yezigidigidi – Ixabiso yonke Business Private kunye Umhlaba nezakhiwo zawo kwi World
Ukuba ngaba ufuna ukuthenga ihlabathi lonke, oku kuya kufuneka ukuba yimalini na.
$180 Zezigidi ukuba Estate Real
$100 Zezigidi ukuba Business Ibhaliswe Private
$10 Zezigidi ukuba ezikhoyo Extralegal.
Le mfumba ethile imali inikwe kumashishini abucala noshishino labucala ngokusebenzisa capitalism.
Capitalism Democratic ithathwa inkqubo embi yezoqoqosho phambi kokuthatha kujonga ezinye. Capitalism Democratic wanyuselwa yi kwaBaseki yoseko of USA. Abanye bathi-Founders Heroes, kaloku abanye ukubabiza “Abanini Slave zazingathandanga ukuba ukuhlawula irhafu UK”. Choice eyakho.
Capitalism Corporate ithathwa inkqubo ku lawula United States ngoku.
Urhulumente wamaKomanisi ziyakulithabatha ukulawula yonke le mali (Ishishini Umhlaba nezakhiwo zawo) ngokwesiseko sokuba urhulumente wazi ngaphezu apho ukutyala imali yakho, kwaye urhulumente ukubaleka zonke zoshishino kunye wawo wonke ezithengiswayo.
Indlela eya esihogweni lusoloko ezenziwe ngezitena kunye neenjongo ezintle. Sithi isidenge lowo uba wazi nto eziyingozi ngaphezu kokuba isidenge uyazi ukuba uyayazi into.
Nye $1 Quadrillion – Ixabiso zonke avela kwi-World
Oku kubonisa ukuba ixabiso lilonke elabelwe zonke yezabelo kwi World (yokubheja isimbo Casino kwifomu yesivumelwano, eyenziwe zibhanki). Ahlobene ke zibheke eziyingozi. Bona sengathi kodwa kodwa yokwenene kakhulu. Ahlobene ezi ukubheja isimbo Casino ixabiso nantoni na bakhetha ukuba babheje, kwifomu yesivumelwano, eyenziwe zibhanki, kweliso mntu (kuba akukho namnye umvayo ngokucacileyo le web munye & yentwana yezabelo).
Khetha “into” yenani, ukwenza ukubheja ixabiso lwexeshan elizayo “into”, ukwengeza isivumelwano & unayo yemvelaphi. Iibhanki ukwenza iingeniso ezinkulu kwi yezabelo, kwaye xa amathuba kwiqamza Ungqabhuko zezona werhafu uya uzakuphela ne bill. Oku lucinga kumthamo iyonke yezabelo (eziqingqiweyo). Ngokufanayo coverage inkampani yeinshorensi xa iyonke zonke iimoto (akuthethi yonke inshorensi zonke iimoto ziya kuhlawulwa ngaxeshanye).
Ngamanye amaxesha Banks benze izivumelwano nesimo self-isikhokhelo. umzekelo: 2x Iibhanki ufake Izivumelwano 2x:
Contract1 = Bank1 elihlawula i $ 10m ukuya Bank2 ukuba ixabiso onyukayo
Contract2 = Bank2 elihlawula i $ 10m ukuya Bank1 ukuba ixabiso onyukayo.
Oku 1000x kwaye baye eqhayisa enye kwenye malunga ubungakanani nezikhundla zawo esukela.
Akukho namnye unako ngokwenene ukulandelela ebole- ntoni na endothi yezabelo, ukuba zibheke enkulu edidayo, kodwa sisiganeko olungaxelwanga ezifana Fed USihlalo Janet Yellen ngesiquphe okunyusa izinga lenzala ku 5% kungenzeka kakhulu implode kwiNkqubo yonke eminye kunye Banks kunye naye, ngokuba enikezelanayo nezinye izakhiwo kunye ethile ebhankini kusenokwenzeka ukuba isandla embi kubhejwa nesimo uhambe yayiwa.
abanye isidenge (mhlawumbi kwelinye ibhange) ngunyana esitokisini ibhanki kwelo kunye nempahla, kwaye bajamelana ungonakala. Oku kuya kubangela ilahleko ithemba iibhanki kunye bonke baqale okuwisa imali yabo ekhuselekileyo-kugcinwe apho, zibangela isiphumo enikezelanayo ka sokutshona yebhanki.
$1 Quadrillion = $1000 zezigidi = $1 Million iibhiliyoni okanye $1 billion Izigidi
Oku kuphuphuma Pyramid
Le Oomasinyusane Oku kuphuphuma wadalwa ukuze uzibone umbutho kweeklasi asethi ngokwemiqathango kwengozi kunye nobukhulu. Le Oomasinyusane Oku kuphuphuma wadalwa ngexesha e United States, xa dollar ngalinye owayexhaswa Gold. Gold yakha isiseko encinane kakhulu ixabiso ethembekileyo, kunye iindidi zee-asethi kumanqanaba ngokuqhubekayo eziphezulu zomngcipheko. Ubukhulu ezinkulu kweeklasi asethi kumanqanaba aphezulu emele ombuso lilonke ixabiso lonke ezimiselweyo ezo asethi.
Njengoko kwandisa ingozi zemali, imali ijonge asuka asethi zomngcipheko (yezabelo), kwimpahla okungenani eyingozi (ukuba imali emzimbeni uze negolide). Ayikho into ngaphandle umngcipheko, kodwa ingozi isihlobo. Le umba kukuba kukho imali encinane kakhulu emzimbeni kunye ngaphantsi Gold kuthelekiswa asethi zomngcipheko, oku kwenza ukuba urhwebo abaninzi ngamaxesha emngciphekweni omkhulu xa wonke umntu efuna ukutsiba sibe yimali negolide, eliqhubela up intengo.
Le uxande encinane etyheli ngaphambili lasekhohlo kuku yonke igolide emhlabeni ngohlobo ebonakalayo. Yonke igolide ehlabathini asiyona bonke “grade utyalomali lwezemali” ifomu.
the $1 Quadrillion udonga ahlobene imali iyabuna kude, ngenxa $1 Quadrillion i uqikelelo yi abahlalutyi zibhetele inyaniso akukho bani omazi lwesayizi yokwenene yezabelo Market.
Ngokupheleleyo original ku IsiNgesi apha: demonocracy.info
guide umsebenzisi ukuba wabaqalayo ngorhwebo forex
Iintlobo ezahlukileyo Binary Iinketho